Iifowusta ezintlanu zikaSzabó zabona baphakanyisiweyo beefilimu kwiBAFTAs | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iiposta zikaSzabó zabonyulwa abahlanu ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo kumabhaso eBAFTA
Qho ngonyaka i-BAFTA, iBritish Academy Film Awards, khetha umculi ukuvelisa uthotho lweepowusta zabonyulwa abahlanu kudidi lwemifanekiso ebalaseleyo.
Kulo nyaka okhethiweyo ibinguLevente Szabó, yaziwa kwinethiwekhi yenethiwekhi kule mizekeliso ikhethekileyo yenzelwe iifilimu ezithile njengenye indlela kunaleyo yaziwa ngabo bonke. Imbeko efanayo ibonisa kwaye oko kusithatha phambi kwabonyulwa abahlanu ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo yonyaka kwezi mbasa zeBAFTA.
Kwiiveki ezimbini kuye kwafuneka enze iipowusta Iifilimu ezintlanu ezikhethiweyo, kuba, phakathi kwabagqatswa abalishumi elinambini ngoDisemba, abo bathathe inxaxheba ekuphumeleleni amabhaso okugqibela abagqibe kwabahlanu.
Iifilimu ezintlanu ezichongiweyo nguCarol, Spotlight, The Revenue, The Big Short kunye neBridge of Spies. Iimuvi ezintlanu ezikumgangatho ophezulu USzabó unike wonke umsebenzi wakhe omkhulu ukuba asinike umbono wakhe ngamnye wabo.
Imizekelo emihlanu eyenziwe ngobuhle kunye nesimbo esikhethekileyo seSzabó esafunyanwa kwi-BAFTA gala ukuze Umnqophiso unikwe igama njengeyona bhanyabhanya ibalaseleyo. Ukusuka kwiphepha elisemthethweni la mabhaso unokufumana iividiyo ezimbini apho sinokubona khona umsebenzi wobugcisa wegcisa kunye nendlela enza ngayo nganye kuzo ngokuzoba kwidijithali. I-Photoshop yinkqubo esetyenziswe ngulo mboniso ene-digital njengeyona nto ibalaseleyo.
Omnye Igalelo elikhethekileyo lalo mfanekiso kulawo mabhaso e-BAFTA athi ekugqibeleni akhethe umboniso weThe Revenue njengophumelele owona mfanekiso mhle kwaye uLeonardo DiCaprio anethemba lokuphumelela u-Oscar awuthandayo kwiveki ezayo.
Unayo yonke imifanekiso apha.
UDaniel Foust naye unayo ulungiselelo olukhethekileyo ngomzobo wedijithali onje ungabona kolu ngeno.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iiposta zikaSzabó zabonyulwa abahlanu ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo kumabhaso eBAFTA
Iifoto ezingama-20 ezibonakalayo ezinokuthenjwa zabalinganiswa beentsomi